Ukunyamezelana kweGluten kunye nokuPhulukana nobunzima - Gluten Ukuziva
Ukunyamezelana kweGluten kunye nokuPhulukana nobunzima
Ukufumana ubunzima kunye nelahleko zombini ziimpawu zokunganyamezelani kwe-gluten.
Ileta yengcebiso yokufunda kumhlobo
Kukho unxibelelwano phakathi kokunyamezelana kwe-gluten kunye nokwehla kobunzima. Nangona urhudo olunganyangekiyo olunxulunyaniswa nokunganyamezelani kwe-gluten kunokubangela ukunciphisa umzimba, kuyamangalisa ukuba ukunganyamezelani kwe-gluten kungathintela ukuncipha kwabanye abantu. Kuko oko; kokubini ukwehla kobunzima kunye nokufumana ubunzima kunxulunyaniswa nokunganyamezelani kwe-gluten.
Ukutya kunye nokusilela ukunciphisa umzimba
Ukuba ukhe wazama zonke iintlobo zokutya ngokuthembekileyo, kodwa kubonakala ngathi awuyi kususa inaliti kwisikali sakho sokuhlambela, oku akuthethi ukuba awunyamezeli. Nangona kunjalo, unokuba kunjalo. Ayinguye wonke umntu otyebileyo ongenakubonakala ngathi uphulukana neepawundi ezingafunekiyo enengxaki yegluten. Okwangoku, abantu abaninzi abanganyamezeliyo i-gluten batyebe kakhulu. Ukuba awunanyamezelo lwe-gluten, ke inkqubo yakho ayinakunyamezela iprotheni efumaneka kwiinkozo ezininzi. Ukuba uyekwanga unganyangwa, unokuzibona udinwe kakhulu, kuba umzimba wakho awunakho ukusebenzisa amandla afumanekayo ekutyeni okutyayo. Ezinye iimpawu zokunganyamezelani kwe-gluten zibandakanya:
Urhudo okanye ukuqhina
Ukuphoswa lixesha lokuya exesheni
Ukukhawuleza kolusu (ukurhawuzelela)
Ukubamba izandla neenyawo (okanye ukuphazamiseka)
Ukuphendula kwi-Gluten Allergy
Ukutya okuqulethe iGluten
I-Gluten ifunyenwe kukutya okuninzi okusetyenzisiweyo kwaye inokuba ifihlwe phakathi kwezithako ezidwelisiweyo kwiphakethi yegravy. Ukutya okwaziwa njenge-gluten kubandakanya:
Ngelixa olu luhlu luchaphazela kuphela amathuba awaziwayo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-gluten ihlala ifunyanwa apho ungayilindelanga khona, kubandakanya iivithamini, amayeza kunye nezinto zokuthambisa.
zenziwa phi izipaji zemichael kors
Ngelixa abantu abaninzi abanesifo se-celiac bebhityile, akunjalo kuwo wonke umntu onesifo esinganyangekiyo. Isifo seCeliac sonakalisa i-villi emathunjini amancinci kwaye, ngenxa yoko, amandla omzimba okwetyisa ukutya kunye nokufunxa izondlo ayaphazamiseka. Le malabsorption inokubangela ukuphulukana nobunzima obugqithisileyo, kodwa kwabanye, ukubhuqwa yindlala kuyangena kwaye umzimba uthathe isigqibo sokutshisa iikhalori ezimbalwa kwaye ugcine ngakumbi njengamafutha omzimba. Oku kunokwenzeka nakwabantu abanesifo sohudo esingapheliyo, okubangela iipounds ezingafunekiyo ezinokubonakala zingenakwenzeka ukuba zikhuphe kungakhathaliseki ukuba utya kangakanani. Kuzo zombini iimeko, umzimba awufumani sondlo saneleyo. Okwangoku, umntu omnye unokubonakala ngathi utyhafile kwaye utyebile kwaye, omnye, unomdla kwaye utyebe kakhulu.
Ukutya okuSimahla kweGluten
Impendulo yazo zombini ezi ntlobo zabantu kukutya okungahambisani ne-gluten kuba isisombululo sijongana nokunceda umzimba wakho ufumane isondlo esifunayo. Ukuphelisa i-gluten kuya kuvumela umzimba wakho ukuba usebenze ngokufanelekileyo kwakhona, ukufunxa zonke izondlo ozifunayo kwimpilo elungileyo-kubandakanya ubunzima obusempilweni.
Ukufunda ukutya ngokukhululekileyo kwe-gluten yinkqubo, kwaye kuba akukho lunyango lokunganyamezelani kwe-gluten, ukutya okungenanto ye-gluten kufuneka kube yindlela yakho yokuphila. Kusenokubonakala kunzima ekuqaleni njengoko ufunda into ekufuneka uyiphephe kwaye zeziphi ezinye iinkozo kunye nesitatshi esinokutyiwa endaweni yezonka ozithandayo kunye neepasta, kodwa ngekhe kuthathe ixesha elide ukuba uqaphele ukuba ukhetho olungena-gluten luyafumaneka endaweni yabaninzi kokutya okuthandayo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uthethe nogqirha wakho malunga nokutya kwakho. Ukuba unesifo se-celiac, i-villi yakho inokulimala ngokwaneleyo ukuba ugqirha wakho aya kuthintela zonke iikhabho ezinzima de kube indlela yakho yokwetyisa inexesha elaneleyo lokuphumla nokulungisa.
Ukunyamezeleka kweGluten kunye nokunciphisa umzimba kuhlala kuhamba kunye, kodwa ukuba ukrokrela ukunganyamezelani kwe-gluten kunokuba noxanduva lokufumana ubunzima bakho, kusafuneka wenze idinga lokubonana nogqirha wakho. Ayisiyi kuba nakho kuphela ukuyichonga ngokufanelekileyo imeko yakho, kodwa uya kukubonelela ngolwazi kunye nenkxaso ngokubhekisele kwindlela yokuphila ngokusempilweni ngaphandle kokutya.
Ukukhupha Abantwana' Iigumbi Kwi-Intanethi Mmovie Isihlangu Brands Guitar Lessons
ixabisa malini inombolo yokulala?
Amagama aqala ngolwimi lwenkulisa
iivenkile zefanitshala eziphuma kwishishini kufutshane nam
kutheni endijonge kangaka
mde kangakanani umntwana oneminyaka eli-16 ubudala
unxibe ntoni emngcwabeni ehlotyeni